Nhau - Ndezvipi zvakanakira windows windows, mukati-kuvhura uye inverted windows, uye yekunze-kuvhura uye yepamusoro-yakaturikwa windows?
Ndezvipi zvakanakira windows windows, mukati-kuvhura uye inverted windows, uye yekunze-kuvhura uye kumusoro-yakaturikwa windows?
Iyo hwindo inzira yekuchenesa mweya uye kuvhenekera mumba medu. Naizvozvo, isu tinofanirwa kushanda zvishoma zvishoma pakusarudza windows. Nhasi, isu tinokuratidza zvakanakira windows-yakaturikwa windows, mukati-yakavhurwa windows, uye nekunze-yakaturikwa windows.
Kufefetedza kwakanaka, kusagadzikana kwemhepo, kuputira neruzha, kuchengetedza kupisa uye kusagadzikana. Mawindo emukati-ekuvhura ari nyore kuchenesa, asi ivo vanozotora chikamu chekamuri kana vavhurwa mukati; ekuvhura ekunze haatore nzvimbo kana akavhurwa, asi iyo yekunze-kuvhura ine nzvimbo hombe yekugamuchira mhepo. Kune dzimwe nzvimbo, zvinorambidzwa kuisa windows-yekuvhura windows.
Vhura mukati uye uwire mukati.
Iyo fomu nyowani yakagadzirwa pahwaro hwesoftware windows. Iyo inogona kuvhurwa munzira mbiri, kungave yakatwasuka kana inverted (chikamu chepamusoro chewindows sash chakatendamira mukati). Kana yakadzoserwa, mukaha unosvika masentimita gumi unogona kuvhurwa, ndokuti, hwindo rinogona kuvhurwa zvishoma kubva kumusoro, uye chikamu chakavhurwa chinogona kuturikwa mumhepo uye ndokugadziriswa nefuremu rehwindo kuburikidza nemahinji. Kubatsira kwayo ndekwekuti: inogona kuve nemhepo, asi zvakare inogona kuvimbisa kuchengetedzeka, nekuti hinji, hwindo rinogona kungovhura masentimita gumi emusono, risingakwanise kusvika kubva kunze, kunyanya rakakodzera kushandiswa kana pasina pamba.
Zvakanakira inverted windows:
1. Haitore nzvimbo yemukati kana yashandurwa. Maketeni anogona kuvhurwa uye kuvharwa zvakasununguka.
2. Vana vanogona kutamba vakasununguka kana vari pasi. Iwe unogona zvakare kuchenesa iyo kamuri pasina kunetseka nezve kurovera musoro wako kana muviri kubva kukona rehwindo.
3. Vana vari kutamba uye vanokwira pahwindo sill havazove munjodzi yekudonha kunze kwehwindo.
4. Paunowira mukati, vhara hwindo chete mumba usati warivhura kune iro rakavhurika mamiriro, saka haufanire kunetseka kuti mbavha ichapinda mukamuri nepahwindo rekutsvagisa. Unogona kuvhura hanger yepamusoro kana iwe uchienda kunochengeta yemukati mhepo iri nyowani nguva dzese.
5. Imba yacho inongova nemhepo inofefeterwa kana yashandurwa. Mhepo inovhuvhuta mukati kubva kudivi rehwindo, kwete yakanangana nemuviri, ichiita kuti unzwe kugadzikana.
6. Kana paine kamhepo kamhepo uye nemvura isina kunaya, madonhwe emvura anogona kungoyerera pagirazi, kwete mukamuri. Chiyeuchidzo cheushamwari: Chengetedza mahwindo akavharwa kana paine mhepo ine simba uye kunaya kukuru!
vhura hwindo rekumusoro rakarembera panze
Iwo ekunze-ekuvhura kumusoro-akaremberedzwa windows anoshandiswa nekushandisa mubato wewindows sash kutyaira inoenderana kufamba kweiyo Hardware actuator, kuitira kuti hwindo bhanhire rinogona kuvhurwa rakatwasuka kana kupinza mukamuri kuvhura imwe kona yekufefetera. Nekutenderedza mubato wehwindo, inopindirana michina yemahara mukati mehwindo inotyairwa, zvekuti hwindo rakakiiwa (bata rakatwasuka zvichidzika pasi), rakavhurika rakavhurika (bata rakatwasuka), uye rakamiswa (bata rakatwasuka kumusoro). Izvo hazvikanganise nzvimbo yemukati uye inowanzo shandiswa kazhinji yenguva; inogona kunyatsogadzirisa dambudziko reanti-kuba, uye zvakachengeteka kuvhura kana pasina munhu mumba kana husiku.
Zvimiro zvemahwindo akasungirirwa pamusoro anovhura kunze:
1. Kufefetedza nekuti nzvimbo yakachinjika ndiyo imwe nzira yekuvhura hwindo yakaturikwa kumusoro, inobvumira mukamuri kutenderera zvakasikwa nemhepo yechisikigo, uye mweya wemukati uri mutsva, uchipedza mukana wemvura yemvura inopinda mukamuri. Mhepo nyowani pasina mubvunzo ichagadzira nzvimbo yekugara yakanaka yevanhu.
2. Chengetedzo Iyo yekubatanidza Hardware yakarongedzwa kutenderedza hwindo bhandi uye akasiyana mabasa echibato chekushandisa kwemukati. Kana bhandi rehwindo rikavharwa, zvakapoteredzwa zvakagadziriswa pahwindo rehwindo, saka kuchengetedzwa uye kupokana-neba kuita kwakanyanya.
3. Nyore kuchenesa mahwindo. Nyore oparesheni uye yekubatanidza mubato zvinogona kuita kuti hwindo bhandi ripinde mumba. Izvo zviri nyore uye zvakachengeteka kuchenesa iyo yekunze nzvimbo yehwindo.
4. Kugoneka Inodzivirira kugara kwenzvimbo yemukati kana hwindo remukati rikavhurwa, uye hazviite kuturika machira nekuisa njanji yekusimudza mbatya.
5. Kuiswa chisimbiso kwakanaka uye kupisa kuchengetedza kuchengetedza Kubudikidza nekukiya kwakapoterera kwakatenderedza bhandi rehwindo, iko kuiswa chisimbiso uye kupisa kupisa kwekuita kwemikova nemahwindo zvinovezwa.
Kune zvakawanda zvakanakira zvekunze-kuvhura kumusoro-yakaturikwa windows, mashandiro mashoma uye kugona kwakanyanya, izvo zvinowedzera zvakanyanya kunakidzwa kwevatengi.